Amaqhinga okuvala i-shutter ekhamera | Izindaba zamagajethi
Ungawukhubaza kanjani umsindo we-shutter kukhamera yethu ye-Android
Singacishe sikuqinisekise lokho akekho noyedwa umuntu empilweni ogweme ukuthatha izithombe, uma unefoni ephathekayo ye-Android noma ithebhulethi ezandleni zakho. Lawa madivayisi namuhla anamakhamera amahle kakhulu, angasisiza ukuthi sithathe izikhathi ezihamba phambili zezimpilo zethu. Kepha Kwenzekani lapho umuntu esaba ikhamera?
Lesi simo singethulwa ezinye zezihlobo zethu noma abangani, abangasethula ngandlela thile yini eyaziwa emhlabeni yaseshashalazini njenge "isigaba sokwesaba"; Esimweni esinjalo, uma siqondisa ikhamera yedivayisi yethu yeselula iye kumuntu othize futhi lowo muntu akawuthandi umqondo wokuthi sithathe lowo mzuzu, lapho-ke ngeke sikwazi ukwenza ngokungahambisani nentando yabo. Inkinga ingenzeka lapho kuthiwa umuntu "onesaba ukwesaba" uzwe umsindo we-shutter ovame ukuvela kwikhamera emile. Ngalesi sizathu, manje sizokhuluma ngezinye izindlela ongazisebenzisa ukwenza lo msindo ungasebenzi, ngakho-ke, thatha izithombe ngaphandle kokwazi komunye umuntu.
1 1.Khubaza umsindo wezilungiselelo zekhamera
2 2. Thatha izithombe ngemodi yokuthula
3 3. Beka idivayisi yethu yeselula kumodi yokuthula
1.Khubaza umsindo wezilungiselelo zekhamera
Enye indlela yokuqala esizoyiphakamisa yile, okusho ukuthi, kufanele sifake ukumiswa kohlelo lwethu lokusebenza bese sibheka inketho ezosivumela ukuthi sivale lo msindo.
Empeleni esizokwenza ukufaka ukumiswa kohlelo lokusebenza lwekhamera, inketho evame ukuba sendaweni efanayo ne-GPS, isitoreji, ikhwalithi yesithombe, ukugqama okuzenzakalelayo, ukusetha kabusha nezinye izinketho ezimbalwa. Uma ngasizathu simbe ungakwazanga ukuthola le nketho ekucushweni kwedivayisi yakho, kusho ukuthi idivayisi ayisekeli ukukhubaza lo msindo. Kepha ungakhathazeki ngaphambi kwesikhathi, ngoba kulokhu kufanele siphakamise ezinye izindlela ezimbalwa, ukuza kwesibili okusekelwa uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu.
2. Thatha izithombe ngemodi yokuthula
Inani elikhulu labantu likhetha ukusebenzisa amathuluzi avela eceleni kunoma iyiphi iplatifomu abasebenza kuyo, ngenxa yokuthi lezi ziphakamiso zivame zilungiselelwe ngokuphelele ukuze umsebenzisi, vele usebenzise umsebenzi oyinhloko hhayi okunye. Ukukhuluma ngekhamera yedivayisi yethu yeselula ye-Android, uhlelo lokusebenza lomuntu wesithathu esizothembela kulo linegama le- Ikhamera ethule, emahhala futhi ungayisebenzisa ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lomkhawulo.
Kungenzeka uyazibuza Sisebenza kanjani lesi sicelo senkampani yangaphandle? Akukho okulula kunalokho, ngoba ngemuva kokulanda ithuluzi ku-Google Play Isitolo kusixhumanisi esilandelayo, kuzodingeka uvule ithuluzi kuphela bese ucindezela inkinobho ezothatha isithombe osithandayo, inqubo yokusebenzisa imodi yokuthula futhi ngaphandle kwanoma ngubani owaziyo ngomsebenzi owenzile ngaleso sikhathi.
3. Beka idivayisi yethu yeselula kumodi yokuthula
Sinenketho yesithathu neyokugcina uma kukhulunywa sebenzisa ikhamera yedivayisi yethu yeselula ye-Android ngomsindo we-shutter ukhutshaziwe. Lokho esingakwenza lapha ukukhubaza imisindo yedivayisi yonke, into efana kakhulu nalokho okuvame ukwenziwa ku-iPad, okungukuthi, inkinobho encane ihamba kuthebhulethi ye-Apple lokho kuthulisa ngokuphelele wonke umsindo ongenayo noma ophumayo.
Ukuze uzuze lokhu, kufanele uye ekucushweni kwedivayisi yakho ephathekayo bese ubheka inketho ethi «Imodi ethule«; Yize usebenzise le nketho ukuthulisa umsindo we-shutter wekhamera emile, kunamamodeli athile lapho lo msebenzi ungahle "ungasebenzi".
Sinikeze umfundi wethu izinketho ezi-3 ezifanele ongazisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi, ngenhloso ye- thatha izithombe usebenzisa ifoni yakho ephathekayo, ngaphandle kokwazi komunye umuntu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungawukhubaza kanjani umsindo we-shutter kukhamera yethu ye-Android
Ikusasa le-Wii U emidlalweni
Amathiphu ahlakaniphile wokufunda ngama-Chromebook